Ahoana ny famolavolana ny fampielezana mailaka fialana amin'ny mailaka | Martech Zone
Tsy misy isalasalana fa namolavola sy nanatanteraka mahomby fampielezana mailaka nandao ny sarety fiantsenana miasa. Raha ny marina, maherin'ny 10% ny mailaka fandaozana ny sarety nosokafana, no kitihina. Ary ny salan'isan'ny vidin'ny fividianana amin'ny alàlan'ny mailaka fandaozana ny sarety dia 15% ambony noho ny fividianana mahazatra. Tsy mahay mandanjalanja fikasana bebe kokoa noho ny mpitsidika ny tranokalanao manampy entana ao amin'ny kalesinao!
Amin'ny maha mpivarotra azy, tsy misy maharary fo noho ny fahitana mpitsidika fidirana be ao amin'ny tranonkalanao ecommerce - mandany fotoana be dia be, manampy zavatra ao anaty kalesiny ary avy eo mandao azy alohan'ny handehanana amin'ny fizotry ny varotra. Ka inona no dikan'izany? Tapaka mandrakizay ve ny marikao? Angamba tsia! Ny sisa ataonao dia ny manao ezaka fanampiny hamerenana azy ireo hiverina ary hampahafantatra azy ireo fa manan-danja izy ireo.
Ity infographic avy amin'ny Email Monks ity dia manome antsipiriany ny fihetsiky ny mpividy e-varotra, ny psikolojia ao ambadiky ny fandaozana ny sarety fiantsenana sy ny fampielezan-kevitra miverina, ary koa ny famoahana ireo dingana 7 amin'ny famolavolana fampielezana mailaka fandaozana ny sarety fiantsenana mahomby.
Fotoana sy olana matetika - Ao anatin'ny 60 minitra avelanao, tokony handefa ny mailaka voalohany ianao. Ny mailaka faharoa dia tokony halefa ao anatin'ny 24 ora. Ary ny mailaka fahatelo dia tokony halefa ao anatin'ny telo ka hatramin'ny 5 andro. Ny fandefasana mailaka fandaozana hatramin'ny telo dia famerenam-bola $ 8.21 eo ho eo.
Diniho ny fandefasana maimaim-poana - Alao sary an-tsaina ireo mpividy no ilainao amin'ny tolotra, na fihenam-bidy na fandefasana maimaim-poana. Asehon'ny fikarohana fa ny fandefasana maimaim-poana dia mety hahomby avo roa heny noho ny isan-jato.
Halalino izy ireo amin'ny fanolorana tsy hay tohaina - Nasehon'ny fanadihadiana fa ny mailaka fandaozana izay misy tolotra fihenam-bidy 5% -10% amin'ny fividianana voalohany dia afaka manampy ny tahan'ny fandaozanao.
Asehoy ny sarin'ny vokatra - Fitaovana fanaraha-maso ny maso dia manambara fa ny fampidirana ny sarin'ilay vokatra nilaozana fa tsy ny rohy vokatra ao amin'ny mailaky ny fandaozana sarety fotsiny dia misarika ny saina betsaka kokoa noho izany raha tsy misy.
Tsy ratsy ny fivarotana an-tsokosoko - Ny fivarotana lakandrano ny vokatra amin'ny mpandao dia mety hanjary fitahiana farany ho an'ny orinasanao. Asehoy ny fifandimbiasana mifandraika sy ny mpivarotra tsara indrindra.
Ataovy miavaka ny mailaka fanariana - Ampiasao ny tantaran'ny fitsidihan'ny mpitsidika anao sy ny fividianana taloha mba hampifanarahana ny tolotra manokana.
Mamaha ny fangatahana - Ny mailaka fandaozana ny sarety dia afaka manampy amin'ny famahana ny fanontanian'ireo mpandao - manome azy ireo fampahalalana marobe ary manampy azy ireo handray ny fanapaha-kevitra momba ny fividianana. Omeo safidy ampy ny mpividy anao hanampiana azy ireo hahatratra anao sy hamahana ny fangatahany.
Ampifanaraho amin'ny fampielezana mailaka fanafoanana ny sarety fiantsenanao amin'ny alàlan'ny dokam-barotra lasibatra indray sy paikady maro fantsona hampitomboana ny fahombiazan'izy ireo amin'ny fandresena ny mpividy miverina.
Tags: fandaozanafandaozana saretymailaka fandaozana saretytolotra fihenam-bidymailaka ecommercefandaozana sarety mailakamailaka ctatolotra fihenam-bidy amin'ny mailakamoanina mailakamaimaim-poana ny fandefasanamulti-fantsonare-lasibatra